FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA RHODESIANINA RIDGEBACK - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Rhodesianina Ridgeback
Bryaba dia nilaza hoe Whatchamacallit aka Shisma, Rhodesian Ridgeback mena-orona amin'ny orony, atody atiny amin'ny 3 taona
Ny Rhodesian Ridgeback dia mpihaza lehibe sy hozatra. Ny loha malalaka dia fisaka eo anelanelan'ny sofina. Ny vavahady dia lava sy lalina, miaraka amin'ny fijanonana voafaritra. Ny orona dia mainty, volontsôkôlà na aty, arakaraka ny palitaon'alika. Indraindray manana lela mainty ity karazany ity. Boribory ny maso ary mavo volontany matetika, miankina amin'ny aloky ny alika. Ny sofina salantsalany dia napetraka avo, midina, midadasika amin'ny fotony ary mihidy hatramin'ny teboka iray. Lalina ny tratra. Ny tongotra eo anoloana dia tokony ho mahitsy sy matanjaka. Somary lava ny rambony, matevina kokoa eo am-potony, mihidy hatramin'ny teboka iray ary miakatra kely miakatra. Esorina indraindray ny demclaws. Ny palitao dia fohy sy matevina miaraka amin'ny volo symmetrika voafaritra mazava amin'ny volo maniry eo amin'ny lalana mifanohitra amin'ny afovoan'ny lamosina. Ny lokon'ny palitao dia misy potika maivana amin'ny alokaloka mena indraindray misy fotsy kely eo amin'ny tratra sy ny rantsan-tongony ary ny mainty. Ny Rhodesian Ridgebacks mainty mena dia tena tsy fahita firy fa indraindray mitranga.
Mpihaza tsara, Rhodesian Ridgeback dia masiaka amin'ny fihazana, fa ao an-trano dia alika tony, malemy paika, mpankato ary tsara. Izy io dia voajanahary tsara, fa ny sasany kosa tsy mahomby amin'ny ankizy kely satria mety milalao loatra izy ireo ka mandondona azy ireo. Alika marani-tsaina, mahay ary mahitsy izy ireo ary tsy mivadika amin'ny fianakaviana. Sahy sy mailo izy ireo. Azo atokana ho an'ny olon-tsy fantatra, noho izany mifanerasera tsara. Manana tanjaka be izy ireo nefa tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana izy ireo dia mety ho lasa strung avo ary tsy tantanana. Ity karazana ity dia mila mafy orina, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana iza no afaka manome fitsipika ny alika dia tsy maintsy manaraka ary mametra izay azony atao sy tsy vitany. Malemy fanahy sy / na tompona passive, na tompona izay ataovy toy ny olombelona ny alika fa tsy kaninina dia ho sahirana amin'ny fifehezana an'io karazany io ary mety hanjary hiady amin'ny alika hafa koa. Rehefa omena izay ilain'izy ireo amin'ny maha-alika biby dia ho alika mpiara-miasa tsara izy ireo, saingy tsy atolotra ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​satria ny ankamaroany tsy manam-potoana na hery hametrahana ao anatiny. Ny ridgebacks dia maneho fihetsika tsara indrindra amin'ny fomba fiasa tsy miovaova izay mafy orina nefa milamina. Manan-tsaina izy ireo ary mianatra haingana, nefa ho mafy loha sy fanahy iniana raha toa ka matanjaka noho ny olombelona izy ireo. Ny fiofanana dia tokony ho malefaka, nefa mafy orina ary tokony hanomboka tanora raha mbola kely ny alika hitantanana. Izy ireo koa dia alika mpiambina tena tsara, fa tsy atolotra ho an'ny alika mpiambina. Tena miaro ny tompony izy ireo. Tsy maintsy resahina izany mandritra ny fiofanana alohan'izy ireo. Ity karazana ity dia mety ho bebe kokoa Handringanana noho ny Lab raha tsy omena fanatanjahan-tena ampy ary tsy resy lahatra fa ny olombelona no fahefana ananany. Aza be loatra mampinono ity karazany ity. Raha toa ka mihaona amin'ny saka sy biby hafa ity alika ity rehefa tanora izy dia ho voasoroka izay olana mety hitranga. Ridgebacks dia manao namana tsara amin'ny jogging.
Milanja: Lehilahy 80 - 90 pounds (36 - 41 kg) Vehivavy 65 - 75 pounds (29 - 34 kg)
Rhodesian Ridgebacks dia karazany mafy orina, mahatanty fiovana mahery vaika amin'ny hafanana, na izany aza dia mora tohina amin'ny dysplasia hip, sinus dermoid ary kista. Mora resahina koa fivontosan'ny sela .
Fikarakarana alika kely 3 herinandro
Rhodesian Ridgebacks dia hanao tsara ao anaty trano iray raha mbola manana fanatanjahan-tena ampy izy ireo. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny tokotany malalaka.
Ireo alika ireo dia manana tanjaka lehibe ary ho reraka ianao alohan'ny hahatongavany. Mila entina izy ireo dia an-tongotra isan'andro, lava, haingana na jogging. Ankoatr'izay dia mila fotoana be dia be izy ireo hihazakazaka, indrindra ny fikatsoana amin'ny faritra azo antoka. Raha avela mankaleo ireo alika ireo, ary tsy mandeha na mihazakazaka isan'andro, dia mety hanimba sy hanomboka haneho isan-karazany ny olan'ny fitondran-tena .
Ankizy 7-8 eo ho eo, 6 eo ho eo
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Aosory borosy sy shampooing mafy raha tsy rehefa ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Rhodesian Ridgeback dia nipoitra tao amin'ny fanjakan'ny Matabele talohan'ny nahatongavany ho Rhodesia ary avy eo Zimbabwe. Niasa toy ny alika fihazana izy ary toy ny retriever, nikarakara ny ankizy ary niambina fananana. Izy io dia nidina avy tamin'ny lakroa teo anelanelan'ny alika voafonja izay nohafaran'ireo mpifindra monina Boer tamin'ny taonjato faha-16 sy faha-17 izay notazomin'ny foko teraka tany Afrika Atsimo niaraka tamin'ny karazany toy ny Khoikhoidog, Mastiff , Deerhound ary angamba ny Great Dane . Ny fenitra napetrany tao Matabeleland, dia nanomboka tamin'ny 1922. Ny Reverend Helm dia nampiditra Ridgebacks roa tany Matabeleland tamin'ny 1877. Tsy ela dia hitan'ny mpihaza lalao lehibe fa raha ampiasaina amin'ny fonosana izy ireo dia tsara amin'ny mihaza liona mitaingin-tsoavaly, ka io no anaran'ny iray hafa antsoina hoe ' Liona Afrikanina. ' Tsara ny alika tamin'ny hafanan'ny afrikanina tamin'ny andro sy ny alina mando sy mangatsiaka. Ny karazany dia nafarana tany Etazonia tamin'ny 1950. Ny Rhodesian Ridgeback dia neken'ny AKC tamin'ny 1955.
Atsimo, AKC Hounds
RRCUS = Rhodesian Ridgeback Club any Etazonia
Riana the Rhodesian Ridgeback eo amin'ny 3 taona eo ho eo
Zuri (Swahili ho an'ny 'tsara tarehy') ny alika Rhodesian Ridgeback amin'ny 8 herinandro
Hana, Rhodesian Ridgeback, mena mainty, tsy dia fahita firy - Sary nahazoana alàlana avy amin'i David Hancock
boxer afangaro amin'ny bulldog amerikana
Alika kely Rhodesian Ridgeback, efa-bolana, Leo (eo aloha) sy Lucy (any aoriana)
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Rhodesian Ridgeback
Rhodesian Ridgeback sary 1
Rhodesian Ridgeback sary 2
Rhodesian Ridgeback sary 3
asehoy ahy ny sary misy mpangalatra manga
misy alika mavokely amin'ny orona ny alika
sarin'ny alika mpampijaly amerikana